समाचार - सी-सितारा २०२० र Huayuemei प्रकाश
सी-तारा - शंघाईको समाधान र रुझानहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सबैको रिटेलको बारेमा, यूरोशप ट्रेड मेला परिवारका सदस्य, २०१ 2015 मा आफ्नो शुरुवातदेखि नै द्रुत गतिमा बृद्धि भएको छ र चीनको खुदरा उद्योगमा प्रमुख प्रभावकारी प्लेटफर्म भएको छ।
सी-स्टार २०२० सफलतापूर्वक सेप्टेम्बर २--4th, २०२० लाई शंघाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो केन्द्रमा सम्पन्न गरियो। तीन सफल दिनहरूमा, सी-स्टारले १44 प्रदर्शकहरू र,, ००० पेशेवर पेसावालाहरूलाई स्वागत गरे।
चिनियाँ खुद्रा उद्योग कोभिड १ to को कारण केही महिनामा नै ठूलो परिवर्तन हुँदै आएको छ। चीनले COVID-१ fighting मा लड्न ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। यो सही समय हो कि हामीले अर्को BoomHuayuemei प्रकाशको लागि कसरी तयारी गर्ने सोच्न यो प्रदर्शनीमा दृढतापूर्वक भाग लिए। प्रदर्शनी कर्मचारीहरु प्रदर्शनी मा महामारी रोकथाम उपायहरु पनि तयार।
सबैलाई मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी राख्नु पर्छ। हाम्रो बुथ निर्माण गर्न हामीसँग एक दिन छ। सी-स्टार २०२० सफलतापूर्वक सेप्टेम्बर २--4th, २०२० लाई शंघाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो केन्द्रमा सम्पन्न गरियो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू प्रदर्शनीको भ्रमण गर्छन्।
हाम्रो बुथले धेरै मानिसहरूलाई भ्रमण गर्न आकर्षित गर्दछ, किनभने हाम्रो आरजीबी डाईनामिक पर्दा एलईडी बुथमा देखाइएको थियो।
हाम्रो डिजाइनरले यस प्रदर्शनीको विषयवस्तु हाइलाइट गर्न रंग प्रयोग गर्दछ, यो आँखा चिम्लिने छ।
हाम्रो सबै ब्याकलाइट पर्दा एलईडी पट्टी डिम्म गर्न सकिन्छ, यो पनि तपाईंको अनुरोध अनुसार रंग तापमान अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
आरजीबी डायनामिक पर्दा एलईडी पट्टी अझै बुथमा सबैभन्दा चकाउने छ, यसले धेरै मानिसहरूलाई यसको भ्रमण गर्न आकर्षित गर्दछ। यसले DMX512 प्रोटोकल अपनाउँछ, र K-8000C नियन्त्रण प्रोग्राम गर्न को लागी।
तपाइँ कुन एनिमेसन चाहानुहुन्छ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ प्रोग्रामिंग गर्न हाम्रो गतिशील पर्दा LED स्ट्रिप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईंको बुथ एक महान एक बनाउने छ!
अर्थव्यवस्थाले दु: ख पाउँदा हामीले सी-स्टारमा भाग लियो इपोकल महत्त्वको!
यो हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामीलाई एलईडी प्रकाशको बारेमा बढी जानकारी दिनुहोस्, हामी हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न र नयाँ नयाँ उत्पाद डिजाइन गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
यसलाई अगाडि राखौं र २०२१ मा तपाईंको अवसरलाई नहेर्नुहोस्।